Ikhompyuter yam icotha, ndiyilungisa njani? | Iindaba zeGajethi
Ikhompyuter yam icotha, ndiyilungisa njani?
UIgnacio Sala | | Windows
Zininzi izinto ezinokuchaphazela ukusebenza kwezixhobo zethu. Uninzi lwazo, ukuba uninzi lwazo, sinokuziphepha ukuba sizisebenzisa kakuhle izixhobo zethu kwaye siyakuphepha ukusebenzisa ikhompyuter njengesixhobo sovavanyo Nasiphi na isicelo esigqitha ezandleni zethu.
Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba iingxaki zomsebenzi ezifunyanwa zizixhobo zethu zibangelwa zezinye izinto, ezinje ngesoftware efakelweyo kwizixhobo zethu okanye icandelo elithile lezixhobo zethu lonakele. Ukuba ufuna ukujonga ukuba kutheni ikhompyuter yakho icotha kwaye ungayilungisa njani, Ndiyakumema ukuba uqhubeke ufunda.
Onke amaqhinga esiwabonisa wona apha ngezantsi Zisebenza kuzo zonke iinguqulelo zeWindows eziqala kwiWindows XP ukuya kuhlobo lwamva nje lweWindows.
1 Susa i-bloatware
2 Jonga iinkqubo ezisebenza kwisiqalo seWindows nakwimvelaphi
3 Cima usetyenziso ongalusebenzisi
4 Sukufaka usetyenziso ngaphandle kwesingqisho okanye isizathu kwiqela lethu
5 Idatha ebalulekileyo, kwi-hard drive yangaphandle
6 Ikhompyuter iyahambelana nohlobo lweWindows
7 Ukuba akukho nanye esebenzayo, sinokubuyisela kuphela iiWindows
Abavelisi bee-Laptop bahlala begxininisa ekufakweni kuthotho lwezicelo ezisebenzayo Akukho mntu usebenzisa Kwaye konke abakwenzayo kukuthoba isantya sokusebenza kweqela lethu. Ezi zicelo ziye zacaphukisa kangangokuba ziye zabizwa ngokuba zii-bloatware.
IMicrosoft iyayazi imania yabavelisi kunye nentiyo engapheliyo yabasebenzisi kolu hlobo lwesoftware. Kuba susa i-bloatware ngokukhawuleza nangokululaIMicrosoft yenza uQalo ukususela ekuqaleni kufumaneke kuthi, umsebenzi oya kusivumela ukuba siphelise zonke izixhobo ezifakwe kumzi-mveliso.
Lo msebenzi uyafumaneka kwi Useto> Uhlaziyo kunye noKhuseleko> Ukhuseleko lweWindows> UkuSebenza kwesixhobo kunye neMpilo.
Jonga iinkqubo ezisebenza kwisiqalo seWindows nakwimvelaphi
Zininzi iinkqubo ezithi, ukuze ziqale ngokukhawuleza, ezifakwe ekuqaleni kwenkqubo yethu, ezibangela ixesha lokuqalisa kwezixhobo zethu lonyukile, ngakumbi xa kukho izicelo ezininzi ezenzayo.
Ukuphelisa usetyenziso kwisiqalo seWindows kuya kusivumela ukunciphisa ixesha lokuqalisa leqela lethu ngaphandle kokuchaphazela ukusebenza kwezicelo. Inqaku elibi kuphela, ukulibiza ngandlela thile, kukuba isicelo singathatha imizuzwana embalwa ukuvula. Ayikho enye.
Ukufikelela kwizicelo ezisebenza kwimenyu yokuqala kwaye uzikhubaze, kufuneka singene kwifayile Umlawuli womsebenzi (Ctrl + Alt + Del). Ngaphakathi kuMlawuli womsebenzi, siya kwithebhu. Ukukhubaza usetyenziso kwisiqalo seWindows, kufuneka siye kuyo kwaye ucofe ku Khubaza iqhosha elikwikona esezantsi ngasekunene.
Cima usetyenziso ongalusebenzisi
Idiski yekhompyuter yethu ayisetyenziswanga ukugcina usetyenziso, kodwa ikwasetyenziswa yiWindows njengememori eyongezelelweyo xa kusetyenziswa i-RAM ebonakalayo kwaye ufuna izixhobo ezingakumbi ukuze uqhubeke usebenza.
Isithuba sediski esisebenzisa njengememori sibizwa imemori ebonakalayo, kwaye ubungakanani bayo bunokwahluka ngokuxhomekeka kumandla esixhobo kunye nokusetyenziswa esisisebenzisayo. Kwiinguqulelo zamva nje zeWindows, imemori ebonakalayo isebenza ngokuzenzekelayo, ngenxa yoko asinakucwangcisa imida yokusetyenziswa.
Oku kuyasinyanzela ukuba soloko unendawo eyaneleyo yasimahla kwikhompyuter yethu ukuze iWindows isebenzise eyona nto iyifunayo ngamaxesha onke. Ukuba nezicelo ezifakwe kwikhompyuter yethu esaziyo ukuba asizukuyisebenzisa, konke okwenzayo kukuchaphazela ukusebenza kwekhompyuter yethu.
Ukucima usetyenziso ngokukhawuleza, kufuneka siye kwi icon yesicelo kwimenyu yokuqala kwaye ucinezele iqhosha le mouse lasekunene ukukhetha Uninstall ukhetho.
Sukufaka iiapps ngaphandle kwemvano-siphelo okanye isizathu kwiqela lethu
Uninzi lwabasebenzisi abathanda vavanyo lweeapps ukuze ubone ukuba benza ntoni, nokuba abananjongo zokuzisebenzisa ebomini. Ngalo lonke ixesha sifaka usetyenziso kwikhompyuter yethu, irejista yeWindows iyalungiswa, kodwa xa siyicima, irejista ayilungiswanga kwakhona ukuyishiya injalo.
Ekuhambeni kwexesha, le yingxaki enkulu kwiqela kuba irejista izama ukukhangela iinkonzo apho zingasekhoyo, kwaye ekuhambeni kwexesha, ixesha lokuqala leqela lethu kwaye Ukusebenza ngokubanzi kuchaphazeleke kakhulu.
Idatha ebalulekileyo, kwi-hard drive yangaphandle
Gcina iifoto zethu, iividiyo okanye iimuvi kwi-hard drive yethu ukuze siqwalasele nanini na sifuna licebo elihle kwaye siyenza yonke imihla.
Kodwa kwiimeko ezininzi oku akunjalo, ke lonke olo lwazi kufuneka lubekho yisa kwi hard drive yangaphandle, ayisiyiyo nje kuphela ukuba ayingeni kwisithuba esingeyomfuneko kwi-hard drive yethu, kodwa ikwaye kufuneka sibe nekopi eyogcino xa izixhobo zethu zinokuyeka ukusebenza.
Namhlanje, Ixabiso leemoto ezinzima liye lahla kakhulu kwaye kulula kakhulu ukufumana ii-drive zangaphandle ezinzima zesikhundla esimalunga nee-euro ezingama-50, ke ixabiso alisosizathu sokuphucula ukusebenza kwezixhobo zethu ngokubanzi kunye nokuphepha ukuphulukana nedatha yethu enexabiso.
Ikhompyuter iyahambelana nohlobo lweWindows
Into yokuqala ekufuneka uyithathele ingqalelo xa ufumanisa ukuba ikhompyuter yethu ayisakhawulezi kangangexesha esithe sayithenga ngayo, ukuba ngaba luhlobo lweWindows esiqhubayo iyahambelana kunye neenkcukacha zeqela lethu kuba inguqulelo nganye entsha yeWindows ifuna amandla athe kratya.
Xa ndisithi iyahambelana, ndithetha oko ayinazo izixhobo eziyimfuneko ukuze isebenze ngokulula. Ukuba ikhompyuter yethu yeza kwintengiso ngeWindows XP, akunakulindeleka ukuba isebenze kakuhle ngeWindows 7 okanye iinguqulelo zamva, kodwa hayi Windows 10.
Ukuba akukho nanye esebenzayo, sinokubuyisela kuphela iiWindows
Xa ufaka kwakhona iiWindows kwikhompyuter yethu, nangona kuyinyani ukuba eyona nto intle kakhulu kukubuyisela ukhuphelo lwenkqubo esiyinikwa ngumenzi, yeyona nto imbi esinokuyenza, nokuba yeyona ndlela ikhawulezayo.
Kwaye ndithi yeyona nto imbi, kuba ekuqaleni Siza kuphinda sisokole kwi-bloatware kwakhona ukuba ndinike ingxelo ngentla. Ukufaka iWindows 10 ukusuka ekuqaleni yeyona nto sinokuyenza. Kwaye nditsho ukuba yeyona nto ilungileyo, kuba akufuneki ukuba siye kwiwebhusayithi yomenzi ukuya kukhangela abaqhubi bezinto zezixhobo zethu, Windows 10 inoxanduva lokuzikhangela ngokuzenzekelayo.
Kwiinguqulelo ezindala zeWindows, ewe, kuya kufuneka sikhuphele abaqhubi, kodwa kuphela, abaqhubi, soze iinkqubo ezinezicelo ezifakwe ngabavelisi ukuba sifuna ukuphepha i-bloatware.
IMicrosoft isinika ifayile ye- isifaki esingazukukhathalela kuphela ukukhuphela ikopi ye Windows 10 inguqulelo esiyifunayo, kodwa kananjalo, iya kuthi isivumele ukuba senze ikopi yogcino lwedatha esifuna ukuyigcina. Esi sixhobo sinokukhutshelwa ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yeMicrosoft.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Windows » Ikhompyuter yam icotha, ndiyilungisa njani?
Ezona smartwatches zibalaseleyo zokubonelela ngeKrisimesi
Izibane ze-Smart kunye nezinye iimveliso ukunika le Krisimesi